Global Voices teny Malagasy » Manomeza ho an’ny Global Voices—ampio izahay hampifandray izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Novambra 2018 19:58 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell Nandika miora
#GivingTuesday  androany, andro iray natokana ho an'ny fahalalahan-tànana eran-tany amin'ny endriny rehetra, ary manantena izahay fa ny Global Voices dia isan'ireo fikambanana izay hotohananao ny asany amin'ity taona ity amin'ny alàlan'ny fanoloranao vola .
Misongadina ho iray amin'ireo ohatra voalohany sy mahery indrindra ny fikambananay amin'ny fanehoana ny fahafahan'ny media natokana hananganana vondrompiarahamonina sy hiarovana ny zon'olombelona mitantana amin'ny lafiny tsara ny fomba iatrehan'ny olona ny zavamisy ivelan'ny fiarahamonina sy ny sisintany misy azy.
Ato amin'ny Global Voices, nanangana vondrompiarahamonina matanjaka sady mahay mangoraka izahay amin'ny alàlan'ny fitaterana tantara sy fanorenana fifandraisana lalina eo amin'ireo kolontsaina sy fiteny ary ireo fahasamihafan'ny fomba fijery. Porofo ny asanay nandritra ny 13 taona lasa fa manova ny fomba fanakaran'ny vahoaka izao tontolo izao io fifandraisan'izy ireo mihoatra ny fefin'ny fahasamihafàny io.
Koa satria mikatsaka hanakatra ny fomba iainana am-pilaminana anatinà tontolo eran-tany sarotra ny vahoaka, lasa ampahany iray maika kokoa anatin'ny asanay ny fizaràna sy fanalehibeazana ny traikefanay sy ny fahaizanay.
Koa miangavy anao hanolotra vola  ho fanampianay anay hanohy ny asa fananganana tetezana, hanoherana ireo herin'ny fankahalàna sy ny tsy fandeferana mandrahona hamadika ny tontolontsika ho toerana tsy ampy fifandraisana sy tsy tsara honenana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/27/131221/
 fanoloranao vola: https://crm.globalvoices.org/donate/